That's so good, right?: July 2010
Posted by Alex Aung at 5:54 PM No comments:
မနက်စာ စားပြီးကတည်းက အလုပ်လုပ်နေတာ အိမ်ကရုံးခန်းမှာအခုထိ။ အိမ်ကရုံးခန်းဆိုလို့ မျက်စိလည်သွားပြီထင်တယ်။ ကုမ္ပဏီ ရုံးခန်းကို ကျွန်တော့်အိမ်ခြံဝင်းထဲမှာပဲ အဆောက်အဦးတစ်ခုနဲ့ဖွင့်ထားတာလေ။ ကွန်ပျူတာစက်ပြင်သမားက ၁၁ နာရီလာမယ်ပြော ထားတော့ အလုပ်လုပ်ချိန်ရသေးတာနဲ့ နည်းနည်းပါးပါး ဆက်လုပ်နေဖြစ်တယ်။ ပြည်တွင်းက လူအများ သူတို့ပိုက်ဆံများကို ကျယ် ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးချနိုင်အောင်၊ ပြီးတော့ အိမ်မှာနေရင်း လုပ်လို့ရမယ့် လုပ်ငန်းတွေအကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီး ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော့်ကုမ္ပဏီက။ ကိုယ့်အိမ်ရုံးခန်းဆိုတော့ မနက် မနက် ရှပ်လက်ရှည်ဝတ်၊ နက်ခ်တိုင်စီးပြီး အလုပ်သွားစရာမလို။
တံခါးဘဲလ်သံမြည်မှ အချိန်ကုန်သွားမှန်း သိရတယ်။ ၁၁နာရီအတိ အချိန်အတိအကျ။ ကွန်ပျူတာပြင်သမားအတွက် တံခါးထဖွင့်ပေး ရတာပေါ့။ သူဝင်လာခဲ့တော့လည်း ကျွန်တော့်ရုံးခန်းရှိရာကို ပြသခေါ်ဆောင်လာပြီး ကွန်ပျူတာကို ထုတ်ပေးရတာ။ ကွန်ပျူတာက ဘာဖြစ်နေတာ၊ ဘယ်လို error တွေတက်လာတာ၊ဆော့ဖ်ဝဲတွေသုံးရင် ဘယ်လိုဖြစ်တာ စတာတွေကို ရှင်းပြလိုက်ရင်း သူ့အမေး ကိုဖြေရပါတယ်။ သူကွန်ပျူတာကို အခြေအနေ အကဲခပ်ရင်း ကျွန်တော့်ကို အသေအချာကြည့်တယ်။ အသက် ၃၇နှစ် ဆံပင်ခပ်တိုတို ညှပ်ထားသလို ပါးသိုင်းမွှေးလည်း ခပ်ပါးပါးညှိထားတဲ့သူပေါ့။ Gym မှာ တစ်ပတ်လေးကြိမ် လေ့ကျင့်ခန်းအမြဲယူဆဲဆို တော့ ဘော်ဒီက တော့ အလန်းစားပါ။ သူ ကျွန်တော့်အသွင်အပြင်ကိုကြည့်ပြီး ကျေနပ်နေဟန်ဖြင့် ငေးနေလို့ စားပွဲပေါ်က ကွန်ပျူတာ ကိုလည်း ညွှန်ပြ လိုက်ပါရဲ့။
ပစ္စည်းကိရိယာတွေကို အသာချ ကွန်ပျူတာတွေကို သူစစ်ဆေးပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ သူ့အနားကပ်ရင်း သေသေချာချာကြည့်ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီကောင်လေး အသက် ၂၅နှစ်လောက်ရှိပြီ။ ဆံနွယ်တွေက နက်မှောင်သန်စွမ်းသလို ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်း အမွှေးအမျှင်သန်တာကိုတွေ့ရပါ၏။ သူ့လက်ဖျံတွေမှာ အမွှေးနုတွေတွေ့ရသလို ကြယ်သီးဖြုတ်ကာ ဟထားတဲ့ ရင်ဘတ်မှာလည်း မပေါ့်တပေါ် အမွှေးနုလေးတွေမြင်ရပါရဲ့။ သူ ကွန်ပျူတာကို စစ်ဆေးပြင်ဆင်နေတုန်း ဘေးမှာထိုင်ချလိုက်ကာ စကားပြောရတာပေါ့။ အဝေးသင်နဲ့ဘွဲ့ရပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဒီဂရီတစ်ခု ရဖို့ကြိုးစားနေသည်တဲ့လေ။ နာမည်က 'ညီဇော်'။ သူ့အကြောင်းတွေစပ်စုရတာက လူလွတ်မဟုတ်ဘဲ အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်နေမှာ စိုးရိမ်ခြင်းက အဓိကပေါ့။ ညပိုင်း သင်တန်းပြီးချိန်တစ်ချို့မှာတော့ သူ date သတဲ့။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်အကြောင်း သူ့အကြောင်း ပြောကြဆိုကြ ဝေမျှနေကြရင်း စားပွဲ အောက်ကို သူငုံ့ဝင်လိုက်ကာ connection တွေကို စစ်ဆေးပါတယ်။
သူလုပ်ကိုင်တာတွေကို စောင့်ကြည့်ရင်း မလှမ်းမကမ်းက အကူအညီပေးဖို့ ကျွန်တော်ရှိနေရပေါ့။ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာ တွေအားလုံး စစ်ဆေးပြီး စားပွဲအောက်က ပြန်အထွက် ရုတ်တရက် သူရပ်တန့်လိုက်ကာ ခါးကိုကိုင်ကာ ငြိမ်နေလေရဲ့။
'အရင်အပတ်ကတည်းက ခါးအောက်ပိုင်းနာနေတာ။ လုပ်ရကိုင်ရ အဆင်မပြေပါဘူးဗျာ'
သူ့ပစ္စည်း ကိရိယာတွေ ကောက်ယူသိမ်းဆည်းပြီး ကွန်ပျူတာကို နေသားတကျထားကာ ကျွန်တော့်အမေးတွေကိုဖြေ ပျက်နေတဲ့ ကွန်ပျူတာရဲ့အကြောင်း ရှင်းပြပါတယ်။ ခါးနာတာ သိပ်မဆိုးသေးဘူးထင်လို့ ဒေါက်တာနဲ့သွားမပြဖြစ်ပါဘူးတဲ့။ အလှည့်အပြုမှာပဲ နည်းနည်းနာတာပါဆိုပဲ။
၁၅ မိနစ်လောက် ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ သူလက်စသတ်ပြီးနောက် ခုံတစ်ခုမှာထိုင်ရင်း ကျွန်တော်နှင့် စကားစမြည် ပြောဖြစ်ကြပါရဲ့။
'မင်း အနှိပ်သမား ကောင်းကောင်းနဲ့ မနှိပ်ကြည့်ဘူးလား ကောင်လေး? ကျွမ်းကျင်တဲ့ အနှိပ်သမားတွေက ဒီလိုကိစ္စမှာ ဆရာတွေပဲကွ'
'Gym မှာတော့ နည်းပြဆရာက နည်းနည်းပါးပါး နှိပ်ပြုပေးတယ်ဗျ'
'အပြင်က အနှိပ်သမားတွေက ဈေးကြီးတယ် မဟုတ်ဘူးလား?'
'ကဲပါ.....အခုမင်းခံစားနေရတာတွေ သက်သာဖို့ ကိုယ်ကူညီပေးပါ့မယ်။ အနှိပ်ခံနေကျဆိုတော့ သူတို့လိုမဟုတ်တောင် မင်း muscle တွေ Relax ဖြစ်သွားအောင် ကိုယ်လုပ်ပေးမယ်။ ဘာ charge မှပေးစရာမလိုဘူး'
'Come on, ကိုယ့် exercise room ထဲမှာ massage table တစ်ခုရှိတယ်'
ရုံးခန်းထဲကနေ ကျွန်တော်ဦးဆောင်ပြီးထွက်တော့ သူ့ပစ္စည်းတွေ ကိရိယာတွေ ခုံတစ်ခုပေါ် အသေအချာထားကာ လိုက်ပါလာပါရော။ exercise room ထဲကျွန်တော်တို့ရောက်တော့ massager table ကိုဖြန့် သန့်ရှင်းတဲ့ towel တစ်ထည်ကိုဖြန့်ခင်းပြီးတင်ထားလိုက် ပါတယ်။
'အ၀တ်တွေချွတ်ရမယ်....?' ချီတုံချတုံဖြစ်နေတဲ့ လေသံနှင့် သူ ကျွန်တော့်ကိုမေးပါတယ်။
'It's alright. မင်းအ၀တ်တွေ ၀တ်ထားရင် ကိုယ်ကောင်းကောင်းနှိပ်လို့မရဘူးလေ။ မင်းအ၀တ်တွေချွတ်ပြီး ဘေးကခုံမှာ တင်ထားလိုက်'
ခုံစောင်းတစ်ခုကို ညွှန်ပြလိုက်တော့ ရှူးတွေကိုချွတ်၊ ဘောင်းဘီရှည်တွေကို ချွတ်ကာ ကျွန်တော့်ကို တစ်ချက်မော့ကြည့်တယ်။ ကျန်နေ သေးတဲ့ တီရှပ်ရယ် အောက်ခံဘောင်းဘီကို လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တော့ ခပ်နှေးနှေး သူချွတ်ကာ ညီဘွားကို လက်ဖ၀ါးနှစ်ဖက်နှင့် အုပ် ထားရင်း ကျွန်တော့်ဘေးမှာ သူရပ်နေရဲ့။ထွားကျိုင်းတဲ့ သူ့ရင်အုပ်အလယ်က အမွှေးနုတွေက တောက်လျှောက်အောက်ကို ဆင်းလာ ကာ ဆီးစပ်က ခြုံဖုတ်ထူထူနဲ့တစ်ဆက်တည်း။ အမြှောင်းမြှောင်းထနေတဲံ သူ့လက်မောင်းတွေ ပေါင်တံတွေ တင်ပါးတွေမှာ အမွှေးနု လေးတွေက ဖုံးလို့။ massage table ပေါ်တက်ဖို့ ကျွန်တော် အချက်ပြလိုက်တော့ သူတုံ့ဆိုင်းဆိုင်းနဲ့ တက်ပါရော။
'ခုံပေါ်အသာမှောက်ပြီး ဆန့်ဆန့်ထား တစ်ကိုယ်လုံး'
ဘီရိုထဲက massage oil ကိုယူ ပြီးတော့တစ်ခါ ကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့ ရှပ်အင်္ကျီကိုပါချွတ်လိုက်ပါတယ်။ ကောင်လေးကိုနှိပ်နယ်ပေးရင်း ချွေးတွေထွက်လာရင် ကျွန်တော့်အင်္ကျီမှာ အနံ့တွေမဆွဲစေချင်ဘူးလေ။ လက်ထဲ ဆီအချို့ကိုလောင်းထည့် သူ့ပခုံးတွေ ခါးအထက်ပိုင်း ကြွက်သားတွေကို အသာစနှိပ်ပါတယ်။
'God, that feels good'
ကျောပြင်တစ်လျှောက်၊ ကျောရိုးဆစ်အတိုင်း အချက်ကျကျနှိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကြွက်သားများဟာ ကျစ်လစ်ပြီး သန်မာလိုက်တာ။ မာနေတဲ့ကြွက်သားတွေပျော့ပြောင်းသွားတဲ့အထိ နှိပ်နယ်ပေးရင်း ဆီအနည်းငယ်ကို လက်ထဲ ထပ်ထည့်လိုက်ကာ ဖောင်းနေတဲ့ သူ့တင်ပါးတွေကို ဖြတ်သန်းရင်း ပေါင်ကြွက်သားများကိုစတင်နှိပ်နယ်ပေးပါတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးအမွှေးနုတွေက ခပ်ပါးပါးရှိနေတော့ ဆီများများတော့ ထည့်ရသည်ပေါ့လေ။ ခြေထောက်ကြွက်သားများကို ကျွန်တော်နှိပ်နယ်စပြုတော့ သူ ဖြစ်စပြုလာပြီဆိုတာ ရိပ်မိရ ပါရော။ ခြေဖ၀ါးနှစ်ဖက်လုံးကို နှိပ်ရင်း၊ ခြေသလုံးကြွက်သားများကို ဖြေလျော့ကာ သူ့တင်ပါးများဆီပြန်ရွေ့ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော့် လက်တွေ။ ကျောပြင်တလျှောက်ကနေ တင်ပါးအကွဲကြောင်းထိ အမွှေးနုလေးတွေက အထင်အရှား။ တင်ပါးဆုံတစ်ဖက်ခြင်းကို နှိပ်နယ် ပေးရင်း နောက်ဆုံး သူ့ကျောအောက်ပိုင်းဆီ ပြန်ရွှေ့ပေးဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်အတော်ကြာကြာ သူ့ကျောပြင်မှာနှိပ်နယ်ပေးချိန် 'ညီဇော်' ကောင်းကောင်းလှဲပြီး ငြိမ်နေတယ် စကားတစ်လုံးမှ မဆိုဘဲ။
မလှုပ်မရှားနေရာမရွှေ့ဘဲ ကျွန်တော့်ကို ရှက်ကြောက်စွာကြည့်ရဲ့။ ကျွန်တော်သိတယ် သူဘာပြဿတာဖြစ်နေလဲဆိုတာ။ 'စိုးရိမ်မနေ ပါနဲ့ကွာ။ လူတိုင်းအနှိပ်ခံရင်း hard-on ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ အစ်ကိုလည်း အနှိပ်ခံတဲ့အခါဖြစ်တာပါပဲ။ ပက်လက်လှန်လိုက် ကောင်လေး'
ခပ်ဖြေးဖြေး သူပက်လက်လှန်အိပ်တယ်။ မာတောင်နေတဲ့ ငပဲဟာ မတ်ပြီးထောင်နေတာများ ၇လက်မလောက်ရှိတယ် ဆီးစပ်က ခြုံပုတ် ဆီညွှန်ပြနေတာ။ သူ့မျက်နှာဟာ ရှက်သွေးနှင့်နီမြန်းနေပြီး မျက်လုံးများဟာ ကျွန်တော့်ကိုမကြည့် ခပ်လှမ်းလှမ်းက အလေးတုံးများတင် ထားတဲ့ ဆီသာငေးနေရော။
'မရှက်ပါနဲ့ကွာ၊ အချိန်တိုင်းဖြစ်တတ်ပါတယ် ဒီလို'
ရင်အုပ်ထူထူနှင့် လည်တိုင်ကို ဆီနည်းနည်းလောင်းလိုက်ကာ ကျွန်တော်စနှိပ်ရင်းပြောလိုက်တယ်။
'ကျွန်တော် ဘယ်တုန်းကမှ အနှိပ်မခံဖူးဘူး၊ ပြီးတော့ လူရှေ့မှာ ဒီလိုလည်း မဖြစ်ဘူး။'
'မင်း ငယ်ငယ်တုန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်နှင့် အတူတူ -ွင်းမထုဖူးဘူးလား?'
'လူပျိုပေါက်တုန်းကတော့ အစ်ကိုဝမ်းကွဲနဲ့လုပ်ဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါကလည်း ကြာလှပြီဗျ'
'ဒါဆိုလည်း အခု အဲဒီအချိန်ကလိုမျိုး သဘောထားကြည့်ပေါ့ကွ။ စိုးရိမ်ကြောင့်ကျတာတွေ ဖြစ်မနေပါနဲ့'
ညီဇော် မျက်ခုံးများကို တစ်ချက်မြှင့်လိုက်ရင်း 'အနှိပ်အနယ်ပြုရင်း sex လုပ်တတ်ကြလားဗျ?' မေးတယ်။
'တစ်ချို့တွေတော့လုပ်တယ်လေ။ လူအပေါ်မူတည်တာပေါ့။ မင်းအခု sex လုပ်ချင်နေလို့လား?'
'I don't know, ပေါင်ကြွက်သားတွေ တင်သားတွေကိုနှိပ်ရင် horny ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ I don't know'
'အစ်ကို နှိပ်တဲ့ကိစ္စပြီးအောင် လုပ်လိုက်မယ်။ ပြီးမှ အဲဒီ့အကြောင်းပြောကြတာပေါ့။'
ကျွန်တော် သူ့ pecs, abs, ပြီးတော့ ဗိုက်ကြွက်သားများပေါ် ဆက်လက်လှုပ်ရှားဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုက်ကြွက်သားများကို စက်ဝန်းပုံနှိပ်နယ် ပေးကာ ဆီးစပ်ကခြုံပုတ်ဖက်ကို အချက်ကျပြောင်းပါပြီ။ ကျွန်တော့်လက်များဟာ သူ့ငပဲကိုခလုပ်တိုက်မိပါရဲ့။ လက်ချောင်းများဖြင့် ဆီးစပ်မှာ အလုပ်ရှုပ်ပြီးနောက် အမွှေးနုတွေများလှတဲ့ ခြေနှစ်ဖက်ကို နှိပ်နယ်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ နောက် သူ့ခြေဖ၀ါးက အကြောပွိုင့်တွေ ကိုလည်း ခဏအချိန်ပေးနှိပ်ပြီး အစီအစဉ်အတိုင်း နောက်ပြန်ဆုတ်ကာ ပေါင်ခြံက နှိပ်ကွက်တွေဆီ လက်ကရောက်သွားပါတယ်။
သူ့ငပဲဝန်းကျင်၊ ရွှေဥတွေကို အခြားလက်ဖြင့်ကိုင်တွယ်ရင်း 'မင်းကိုဆက်ပြီး ပြုစုပေးစေချင်လား?' မေးမိပါတယ်။
'ကိုယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်နှိပ်နယ်ပေးတာမှ climax ကောင်းကောင်းတစ်ခုနှင့်အဆုံးသတ်ရမှာကိုကြိုက်တယ်'
'ဒါဆို ကိုကြီးရော အနှိပ်ခံတဲ့အချိန်တိုင်း ဆုံးခန်းထိရောက်တယ်ပေါ့?'
'ဒါပေါ့။ ကိုယ့်အနှိပ်သမားက အရမ်းဂရုစိုက်တယ်။ တစ်ချို့အချိန်တွေဆို oral sex လုပ်ပေးသလို၊ တစ်ခါတလေ fuck တယ် ကိုယ့်ကို'
'Fucks you? အဲဒါနာလားဗျ?'
'Lube သုံးတော့ သိပ်မနာပါဘူးကွာ။ သူ့ဟာကလည်း မင်းလိုပဲကြီးတယ်'
Foreskin ကို အထက်အောက်ငြင်ငြင်သာသာ ပွတ်ဆွဲရင်း သူ့အမေးတွေကို ဖြေတာပေါ့ ကျွန်တော်။ သူနောက်ပြန်လှဲသွားရင်း မျက်စိတွေမှေးမှိတ် သွားရဲ့။ ရွှေဥတွေို့ ဆက်လက်ပွတ်သပ်ပြီး ခရေပေါက်နှင့် ရွှေဥကြားနေရာလေးကို အသာဖိဖိပြီး ကလိဖြစ်ပါတယ်။ ထိပ်ဝလေးကားပြီး ကွမ်းသီးခေါင်းပွလာတော့ သူ့ငပဲတစ်ချောင်းလုံး ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲရောက်ကရော။ massage oil ရဲ့အနံ့၊ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ကိုယ်နံ့တွေ ခံစားရမိပြီးနောက် ကျွန်တော်လည်း turn-on ဖြစ်လာမိသည်လေ။
ညီဇော့် ခြေနှစ်ဖက်ကို ကွေးစေရင်း ရင်ဘတ်ကိုဖိကပ်စေကာ ရွှေဥတွေဆီ ရွှေ့ပြောင်း လျာကစားဖြစ်ပါရော။ ရွှေဥတစ်လုံးစီကို ခဏစုပ်မျိုပြီးနောက် နှစ်ဥလုံးကို ပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်ပါတယ်။လျှာတွေက ဝေ့၀ိုက်ရင်းကလိတော့ သူ့ပါးစပ်တွေ အနည်းငယ်ဟလာကာ၊ ခရေ ပေါက်ဆီ ရောက်တော့ ပါးစပ်ကျယ်ကျယ်ဟာကာ အသံထွက်ညည်းပါပြီ။ အမွှေးအတော်ထူတဲ့ ခရေပေါက်ပါပဲ။ အဲဒီအမွှေးတွေပါ လျှာဖြင့်ရစ်ယူရင်း စုပ်မျိုဖြစ်တော့ သူခြေချောင်းတွေ တဆတ်ဆတ်ခါတယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ကျွန်တော့်ညွှန်ကြားမှုအောက်မှာ 'ညီဇော်' သီချင်းဆိုတယ် အော်ညည်းနေတာ။ အမွှေးထူတဲ့ သူ့ တောင်ကြားလမ်းနဲ့တင်ပါးသား ခပ်ထူထူလေးတွေကို လျှာနဲ့သာမက သွားနှင့်ဖွဖွကိုက်ကာ ဆော့ကစားဖြစ်သည်။ ခရေပေါက်ကို လျှာဖြင့်ကလိစဉ်မှာတော့ အနံ့အချို့၊ မဆိုးဝါးလှတဲ့ အနံ့အသက်အချို့ကို ရ့ပါရဲ့။ သူ့ဆီးစပ်က ချုံပုတ်ကိုနှာခေါင်းဖြင့် ထိမိစဉ်က ရသည့်အနံ့မျိုး။ ဗိုက်သားတွေစီပြန်ပြီး ညွှန်နေတဲ့ သူ့ငပဲကို အသာပြန်ကိုင်လိုက်ကာ ပါးစပ်ထဲ စုပ်မျိုလိုက်ပါတယ်။ တစ်ပြိုင်တည်း ရွှေဥတွေကို ပွတ်သပ်ညှစ်ပြုပေးတော့ သူ့ငပဲဟာ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ ပိုပိုတုတ်လာသလိုပါပဲ။ရှက်ကြောက်စိတ်တွေမရှိတော့ဘူး ထင်ရဲ့ အသံထွက်မိန်းမောစပြုလာသလို ရုတ်တရက် သူ့ခါးကိုကော့ကာ တွန်းတင်လိုက်တော့ ငပဲတစ်ချောင်းလုံး ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ တဆုံး မြှုပ်သွားပါရော။
အနေအထားမပြောင်းဘဲ ခဏငြိမ်နေပြီးနောက် လက်အစုံဖြင့် ကျွန်တော့်ခေါင်းကိုကိုင်လိုက်ရင်း 'အား...အ...အား' အော်ညည်းကာ ရွှေရည်တွေကို ပါးစပ်အပြည့်ဖြည့်ပေးပါတော့တယ်။ သူ့ငပဲ ပျော့ဖတ်မသွားချင်အထိ ဆက်ပြီးစုပ်ပေးလိုက်တာ အရသာကောင်းပါပေ့။ ပင့်သက်ရှူရှိုက်ရင်း လဲလျောင်းနေဆဲ သူ့ငပဲကိုစုပ်ရင်း ရွှေဥတွေကို ကလိကာ ဘယ်ဘက်လက်ကတော့ ရင်အုပ်တွေ ချက်အလယ်က အမွှေးနုလေးတွေကို ပွတ်သပ်ဖြစ်ပါရော။
နောက်ဆုံး သူပြောတယ် 'God, That was wonderful. ဘ၀မှာ တစ်ခါမှ မခံစားဖူးတဲ့ ခံစားချက်ကြီးပဲဗျ'
'အစ်ကိုလည်းကြိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုနေရုံနဲ့မင်းကို gay လို့မဆိုနိုင်ပါဘူးကွာ။ အိမ်ထောင်သည် သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း အစ်ကိုနှိပ်ပေးဖူး တယ် အကြိမ်ကြိမ်။ ပြီးရင် sex လုပ်ဖြစ်ကြတယ် အချိန်တိုင်း။ ငါတို့အားလုံး gay မဟုတ်ဘူးနော်။ အစ်ကိုတို့ အမျိုးသားဖြစ်ရတာ ကိုယ်ခန္ဓာတွေ ထိတွေ့ရတာကို သဘောကျရုံသက်သက်'
ညီဇော်ထထိုင်ဖို့ ကြိုးစားပေမဲ့ ကျွန်တော်သူ့ကိုတွန်းပြီးပြန်လှဲစေလိုက်တယ်။ 'လှဲပြီးအနားယူ ခဏငြိမ်နေပါဦးကွာ' ။ မိနစ်အနည်း ငယ်ကြာပြီးနောက် သူ့ကိုမှောက်အိပ်ဖို့ ပြန်လည်ညွှန်ကြားလိုက်ပါရဲ့။ အသာအယာမှောက်အိပ်လိုက်ပြီးချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့် သူ့နောက်ပိုင်းကြွက်သားများဆီပြန်လည် အလုပ်များပါတော့တယ် လက်အစုံက အစုန်အဆန်ပြုရင်း အမွှေးထူ သူ့ပေါင်ခြံဆီ လူးလားခတ်ရင်းပေါ့။
'ကောင်းတာပေါ့ကွ၊ အခုမင်းအကြိုက်တွေ့မယ့် အရသာသစ်တစ်ခုပေးမလို့ '
လက်ဖ၀ါးထဲ ဆီကိုလောင်းထည့်လိုက်ပြီး သူ့တင်ပါးတွေဆီပွတ်သပ်နှိပ်နယ်ပါတယ်။ အိပြီးနုညံ့တဲ့တင်သားဆိုင်များကို ခပ်ရွရွပွတ်သပ် ရင်း တောင်ကြားလမ်းလေးထဲ လက်ချောင်းများဖြင့် ပွတ်သပ်ကာ ခရေပေါက်ဆီမျှော့သွေးစမ်းရင်း အမွှေးအမျှင်တွေဖယ်ရှားရသည်လေ။ ခရပေါက်လေးကို ဆီနှင့်အတူ ချောချောမွေ့မွေ့ပွတ်သပ်တာ ခဏကြာသည်အထိ။ သူ့ပါးစပ်က ညည်းတွားသံသဲ့သဲ့ထွက်လာချိန်မှာ တော့ လက်ခလယ်ကို ခရေ၀မှတစ်ဆင့်ဖြည်းဖြည်းလေးထိုးထည့်ပြီး သွင်းလိုက်သည်။
လက်ချောင်းလေးကို ဖိသွင်းရင်း သူ့ prostate ကိုရှာတွေ့ချိန်ထိ အသာအယာပြုရသည်ပေါ့။ အထုတ်အသွင်း ညင်သာစွာပြုရင်း ခရေ၀လေးကို ပွတ်သပ်ရင်း ပက်လက်လှန်ပြီး အိပ်စေလိုက်တယ်။ သွင်းထားတဲ့ လက်ချောင်းကို မကျွတ်စေဘဲ prostate ကိုထိမိစေပါ့။ မမာ့တမာဖြစ်စပြုနေတဲ့ သူ့ငပဲကို ပါးစပ်နွေးနွေးထဲငုံလိုက်ရင်း ကျွန်တော် သူ့ prostate ကိုဆက်ပြီးနှိုးဆွနှိပ်နယ်ပေးဖြစ်၏။ ပါးစပ်မှ မိန့်မူးသံတွေ ထွက်လာသလို သူ့လက်များဟာ ခုံစောင်းများကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဆုပ်ကိုင်ပါရော။ အမွှေးနုတွေဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ သူ့ပေါင်တံတွေနဲ့ ကျွန်တော့်ဦးခေါင်း၊ ပခုံးတွေကို ချုပ်ထားရင်း သူ့တင်ပါးများကိုကြွကာ ကျွန်တော့်လက်ချောင်းများနှင့် ထဲထဲဝင်ဝင် ပတ်သက်သည်။
ညီဇော့်ငပဲဟာ တဖြည်းဖြည်းထွားလာတယ်လို့ လည်ချောင်းထဲထိ ခံစားရတာပါ။ ကျွန်တော့်နှာတံတွေဟာလည်း ခြုံပုတ်ထဲက ယောက်ျားနံ့စစ်စစ်ကို ပြည့်ပြည့်၀၀ကိုရှူရှိုက်နေရတာလည်း အပါအ၀င်။ အဆုံးထိဖိကပ်လိုက် ကွမ်းသီးခေါင်းထိပြန်ထုတ်လိုက်လုပ်ရင်း ဘယ်ဘက်လက်ဖြင့် ခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားပေးဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာတော့ ပူနွေးတဲ့ ချောကလက်ရည်ပျစ်ပျစ်များ သူနောက်တစ်ကြိမ်ပန်းထုတ်ပါတော့တယ်။ ညာဘက်လက်ဖြင့် သူ့ prostate ကိုမိနစ်အနည်းငယ်ကြာသည့်တိုင် ဆက်လက်ကလိနေ တာ ငပဲထိပ်ဝက နောက်ဆုံးတစ်စက်ထွက်သည်အထိ။ ခြေလက်တွေအားလုံးပြေလျော့သွားချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်ထရပ်လိုက်ကာ သူ့ကိုအလွတ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။
စားပွဲပေါ်မှာ နူးညံ့စွာ ညည်းတွားသံပြုရင်း မိန်းမောနေရင်း အတန်ကြာ သူလှဲလျောင်းနေပါသေးတယ်။ အချိန်နည်းနည်းကြာမှ သူ့ပါးစပ် က အသံလေးတွေ ပျောက် မျက်စိကိုဖွင့်ကာ ထထိုင်ပါတော့သည်။
ပါးချိုင့်များပေါ်လွင်သည်အထိ အပြုံးဝေကာ ကျေးဇူးစကားဆိုရင်း သူစားပွဲဘေးမှာ ရပ်တန့်လိုက်ကာ အ၀တ်တွေတင်ထားတဲ့ ခုံစောင်း ကို တစ်ချက် check လုပ်တယ်။ ကျွန်တော့်မျက်လုံးများကတော့ အ၀တ်မပါ သူ့တစ်ကိုယ်လုံးကို နောက်ဆုံးကြည့်ဖြစ်တာပေါ့။ ခန္ဓာ ကိုယ်အချိုးအစားက ပြေပြေပျစ်ပျစ်နှင့် အချိုးကျလှသည်။
'မင်းကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွ။ မင်းတစ်ကိုယ်လုံးနှိပ်နယ်ပေးရတာကို ကိုယ်သဘောကျတယ်။ အတော်လန်းတဲ့ ဘော်ဒီ မင်း ရထားတာပဲ။ ၀မလာအောင် ဂရုစိုက်'
ကျွန်တော့်ကိုစကားများပြန်ပြောရင်း သူ့ရှူးဖိနပ်များ၊ အ၀တ်များကို ဖြည်းငြင်းစွာ ၀တ်ဆင်နေတာ။ အသာစောင့်ကြည့်ပြီးနောက် သူအားလုံးဝတ်ဆင်ပြီးချိန်မှာတော့ ရုံးခန်းဘက်ကိုပြန်လည်ဦးဆောင်ခေါ်ယူခဲ့ပါရဲ့။ ရုံးခန်းထဲက ကျွန်တော့်စားပွဲမှာ ၀င်ထိုင်လိုက်ရင်း Checkbook ကိုဆွဲယူလိုက်ကာ စားပွဲပေါ်ဖန်တုံးဖြင့် ဖိထားခဲ့တဲ့ သူ့ပြေစာကို ကြည့်လိုက်ပါတယ်။
'ညီ့ကို လုံလုံလောက်လောက် ပေးပြီးပြီပဲ'
ဒါပေမဲ့ Checkbook မှာလုံလုံလောက်လောက်ပမာဏတစ်ခုရေးရင်း လေးပါအပိုစောင်းပေးကာ tip money သူ့ကိုကမ်းပေးလိုက်ပါ တယ်။
'အဲဒီမှာ မင်းကိုယ့်ကို တစ်ခုခု လုပ်ပေးနိုင်မယ့်ဟာရှိပါတယ်'
'အော်...မကြာခဏ ဒီကိုပြန်လာပြီး ကိုယ့်ကိုလာတွေ့လှည့်လေ'
သူ့ပစ္စည်း ကိရိယာတွေကို ဆွဲကိုင် တံခါးမဆီ ခြေလှမ်းလိုက်ရင်း ကျွန်တော့်ကို ပြန်လှည့်ကာ ပြုံးပြရင်း 'I will, စနေနေ့မနက်ဆို ကိုကြီးဘာလုပ်လေ့ရှိလဲဗျ?'
Alex aung (15 July 2010)
Posted by Alex Aung at 6:51 PM No comments:
အိုကေ၊ ကျွန်တော့်အသည်းကွဲ ဇာတ်လမ်းကိုဘော်ဒါအတော်များများကို ပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ 'ကိုညီ' သူ ကျွန်တော့်ခံစားချက်တွေကို လျစ်လျူ ရှုတယ်။ ဖုန်းမက်ဆေ့စ်လေးတေစ်ခုကနေ ဖြတ်စာရခဲ့တာပါ သူ့ဆီကနေပြီးတော့လေ။ သူဟာ လိင်ကိစ္စအတွက်သာ ကျွန်တော့်ကိုတွဲ ခဲခြင်းဖြစ်ပြီး အချစ်ဆိုတာ သူ့အတွက်သေဆုံးသွားပါပြီတဲ့။ ထပ်ပြီးဟန်မဆောင်ချင်တော့တဲ့အကြောင်း၊ သူ့လိုအင် အတွက် ဖြည့်ဆည်း ပေးဖို့ အသင့်ရှိနေခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ကို ကျေးဇူးတော့တင်ပါသတဲ့။ အကြောင်းပြချက် ဒါမှမဟုတ် သူ့ရင်ခုန်သံဟာ ကျွန်တော့်အပေါ် ဒီလို တကယ်များ သဘောထားခဲ့သလား? ကျွန်တော်လေ ဟန်မဆောင်နိုင်စွာပါပဲ ဖုန်းမက်ဆေ့စ်တွေပို့တယ်၊ ဖုန်း ခဏခဏဆက်ပြီး စကား ပြောဖို့ကြိုးစားတယ်၊ သူ့အိမ်နားကိုရောက်အောင်သွားပြီးတွေ့ဖို့ကြိုးစားတယ်။ တုန့်ပြန်မှုကတော့ နတ္ထိပါ။ ပြင်းပျနေတဲ့ ကျွန်တော့်အ ချစ်စိတ်တွေ လေထဲ လွင့်မျောကုန်သလို သူဘာကြောင့် ဆိုတာတော့ မြင်ယောင်ကြည့်လို့ရပါရဲ့။ သူ့ ပတ်ဝန်းကျင်က အဆင်ပြေစွာ တွေ့နိုင် ကျွန်တော့်ထက် လိုအင်ဆန္ဒဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်သူနှင့် ရှေ့ဆက်ဖို့ဆိုတာ။
တစ်ခါက ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ စကားထဲမှာ ခပ်တောင့်တောင့်ခပ်ထွားထွား အိန္ဒိယလူမျိုးနှင့် ဆင်တူတဲ့ ဘဲတစ်ပွေနှင့် တွေ့ဖူးတာ၊ အဲဒီ့ဘဲရဲ့ ရင်အုပ်မွှေးတွေအကြောင်း၊ -ိင်တံကထွားပြီး ကြီးတဲ့အကြောင်း၊ သူတို့ fucking မလုပ်ဖြစ်ပဲ ဟိုကိုင် သည်ပွတ်ပဲလုပ်ဖြစ်ကြတာ ကိုညီက မစားရ၀ခမန်း ပြေပြခဲ့ဖူးတာပဲ။ ပြင်သစ်အနမ်းတောင် အဲဒီဘဲဆီက အကြိုက်တွေ့ခဲ့တာဆိုပါလား။
ယုံကြည်နိုင်တာက ကျွန်တော် အလွန့်အလွန် သူ့ကိုလွမ်းနေခဲ့တာ။ ကျွန်တော်တို့နှင့် ပုံစံတူအဖြစ်အပျက်တူ ကောင်လေးတွေအတွဲကို မြင်ရပေမဲ့ နှိုင်းယှဉ်မရခဲ့ပါ။ ကျွန်တော် 'ကိုညီ'နှင့် အိပ်ယာပေါ်မှာ တူယှဉ်တွဲနေခဲ့တုန်းက ဘာ Role ဘာသတ်မှတ်ချက်မှ မထားခဲ့ဘူးပါ။ တွေ့ကြတဲ့အခါ သူဘာလိုချင်သလဲ ၊ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်သလဲ အပေါ်သာ မူတည်ခဲ့ကြတယ်။ အခု Oral sex အရမ်းလုပ်ချင်တာပဲ။ မနက်က ခဏတွေ့ဖြစ်တဲ့ 'ဝေဟန်'နှင့် လုပ်ဖြစ်တော့ သူရာဘာအစွပ်ကို အသုံးပြုတယ်။ အဲဒါကို ပါးစပ်ထဲထည့်ရတာ -ိင်တံအစစ်အမှန် ကို စုပ်ရတယ်လို့ ဖီလင်မရပါဘူး။ ရာဘာတစ်ခုကို ၀ါးနေရသလိုပါပဲ။ ဝေဟန်က အားနာပြီး flavor အမျိုးမျိုးပါတဲ့ အစွပ်တွေကိုပြတယ် သုံးကြည့်တယ် ကျွန်တော့်အတွက် ဟင့်အင် ပါပဲ။ ကိုညီရဲ့ -ီးလို အစစ်အမှန်အရသာမျိုး အာမတွေ့။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိထားကြည့်မိမှ 'ကိုညီ'နဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ပေမယ့် ကျွန်တော်နှင့်match ဖြစ်တာ၊ အာသာဆန္ဒပြင်းပြမှုခြင်းတူတာ မတွေ့ မိသလို၊ သူ့အပြုအစု၊ သူ့အပွေ့အဖက်များဟာလည်း တခြားသူများထက် ကျွန်တော့်ကို ရင်ခုန်တိမ်းမူးစေနိုင်တာ အခုထိ တသနေ စေတာမျိုး မရှိတာကို သိရပါရဲ့။ ဒါအရိုးသားဆုံးပြောခြင်းပါ။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်မာနများကို မျိုချအဝေးနှင်ရင်း သူ့ဆီကို ဖုန်းမက်ဆေ့စ်လေးတွေပို့၊ မေးလ်မက်ဆေ့စ်တွေပို့ကာ ပြန်လည် ထိစပ် ကြဖို့ ကြိုးစားဖြစ်ပါတယ်။ သူကျွန်တော့်ကို ဘယ်လိုနေရာမှာပဲထားထား သူနဲ့မခွဲနိုင်တာ ကျွန်တော့်လိုအင်ဆန္ဒ။
ကြိုးစားပါများတော့ နောက်ဆုံးမှာ ကိုညီတစ်ယောက် ဖုန်းထဲက စကားတွေပြန်ပြောလာတယ်။ အရင်က နှစ်ဦးသားကြားဘာမှ မဖြစ် သလို ချိုချိုသာသာ။ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မယ့် အချစ်ကျောင်းအတွက် ရာသီအစပေါ့။ ဖုန်းပြောရင်း နှုတ်ဆက်ဖြစ်ကြတော့ အရင်ကလို dirty talking လေးတွေနှင့် အသံဖြင့် အာဘွားဖြစ်ကြပါလေ့။ အဆုံးသတ်အဖြေက အခုလာမယ့် တနင်္ဂနွေမှာ တွေ့ဆုံကြဖို့ သူကပြောပါ တယ်။ ဒီလိုလေး ပြောတာကိုက အပေါင်းလက္ခဏာတွေ ရရှိခြင်းပါ။ ချိုချိုသာသာ စကားလေးတွေ အနမ်းလေးတွေ ကြားရတာ ကျွန်တော့်ခံစားချက်တွေ ပြန်လည် ရှင်သန်ပြည့်စုံလာသလိုပါပဲ။
မတွေ့ရတာကြာတော့ ရင်ထဲငြိမ်သက်နေပြီထင်တဲ့ သူ့အတွက်ရင်ခုန်သံတွေဟာ သူ့အကြောင်းထိုင်တွေးရင်း တဒိန်းဒိန်းခုန်လာတော့ တာ။ သည်းခံမှုနှင့် နားလည်နိုင်စွမ်းဆိုတာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအဖြစ် ချစ်သူတွေကြားမှာ ရှိသလား? သူကျွန်တော့်အပေါ် ဘာတွေ စိတ်ပျက်ခဲ့လဲ? ကျွန်တော်သူ့အပေါ် ဘာတွေ အမှားပြုခဲ့မိလဲ? ပြန်တွေးနေမိသလို ဒီတစ်ခါ မဖြစ်စေရဖို့ စဉ်းစားပြင်ဆင်မှာပါ။
ကျွန်တော် အခန်းကို အမြန်ဆုံးပြန်လည်ရှင်းလင်း၊ သူကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ရိုးတံရှည် နှင်းပန်းတွေကို အခန်းအနှံ့ မွှေးပျံ့စေတာ ပန်းအိုးလှ လှလေးတွေနှင့်ပေါ့။ အိပ်ခန်းပြတင်းနားက ဘန်ဆိုင်းပင်ပုလေးနှစ်ခုကိုလည်း ပြန်လည်သရတယ်။ သူက စိမ်းလန်းခြင်းကို နှစ်သက်သူ မွှေးပျံ့တာကို လိုလားသူလေ။
အလုပ်မှာ၊ အိမ်မှာ သွားလာလှုပ်ရှားရင်း ရောက်လာတော့မယ့် တနင်္ဂနွေနေ့ကို ရင်ခုန်စွာစောင့်နေမိပါရဲ့။ လာမယ်လို့ သူကတိပေးထား တာပဲလေ။ သူ ကျွန်တော့်ကို စိတ်ပျက်စေမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူ့ရယ်မောသံကို ကျွန်တော်အား ကူးစက်စေမှာပါ။ နောက်ဆုံးအကြိမ်တွေ့ခဲ့ တုန်းက အိမ်ဧည့်ခန်းမှာ နှစ်ကိုယ်တူချစ်ရည်လူးကြတာ ကိုဗီဒီယိုရိုက်ထားကြဖို့ ဖြောင်းဖျဖြစ်ခဲ့ ရိုက်ကူးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကြည့်မိသူတိုင်း စိတ်ကြွလာစေမယ့် ရိုက်ချက်၊ မာန်ဟုန်ပြင်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်များပါတဲ့ ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပေမဲ့ သူက လုံးဝပြန်မကြည့်ခဲ့တာကြောင့် ကျွန်တော်လည်း ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပါရော။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဘာရည်ရွယ်ချက်မှမရှိ မှတ်တမ်းသဘောပဲ ယူဆခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ သူကတော့ အဲဒီကိစ္စနောက်ပိုင်း ကျွန်တော့်ကို ခွာစပြုလာတော့တာ။
နောက်ဆုံး 69 sucking လုပ်တုန်းသူပြောတာလေးကို မှတ်မိသေးပါတယ်။
'မင်းပါးစပ်ထဲက လျှာတွေ အာတွေထဲ ပန်းထည့်ရတာ ကောင်းလိုက်တာ'
အခု စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနှင့် လုံးထွေးဖို့ မသင့်တော့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်ဆို ကိုညီ တနင်္ဂနွေနေ့ကျရင် လာမှာ။ အခန်းတံခါးဝကို အသာဆွဲ ဖွင့် ကိုညီက မျှော်လင့်တကြီး မျက်ဝန်းတွေနှင့် စိုက်ကြည့်နေတာကို တွေ့ရ ဘယ်လောက် စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ ကောင်းလိုက်မလဲ။ အတွေး ထဲမှာတောင် ကျွန်တော် သူ့ကိုဘယ်လောက်တမ်းတနေဆဲဆိုတာ သိသာလှပါပြီ။ သူ့ရဲ့ အသွင်အပြင်၊ လှုပ်ရှားမှု၊ အသံတွေက အစ ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေဆဲပါ။
မကြာခင်သော အချိန်နေ့ရက်တွေအတွင်းမှာ မိန့်မူးခဲ့ရတဲ့ သူ့အနမ်းတွေ၊ နွေးထွေးခဲ့ရတဲ့ သူ့ရင်ခွင်ကို ပြန်လည် ခိုလှုံရတော့မှာ မဟုတ်လား။ စောင့်နေရချိန်တွေကို မြေကြောရှုံ့သလို ရှုံ့ပစ်လိုက်ချင်ပါတယ်။
နာရီတွေလည်ပတ်၊ နေ့ရက်တွေကျော်ဖြတ်ကာ တနင်္ဂနွေနေ့ကိုရောက်လာပါပြီ။ စက္ကန့်လက်တံတွေမှသည် နာရီလက်တံတွေက မနက် ၁၀နာရီကိုညွှန်ပြချိန်မှာတော့ အိပ်ခန်းပြတင်းပေါက်ကနေ လမ်းမကို လှမ်းမျှော်ကြည့်နေဖြစ်ပါတယ် စားမေးပွဲဖြေဆိုသူရဲ့ ရင်ခုန်မှုမျိုးနဲ့ ပေါ့။ လေအဝေ့မှာ မွှေးလာတဲ့ နှင်းပန်းအနံ့နဲ့အတူ လမ်းမဆီအကြည့် သူ့ကားအ၀ါလေး အိမ်ဝင်းထဲချိုးကွေ့လာတာကို မြင်ရတယ်..... သူ...သူလာပြီ။ Wow! အလန်းစားပါလား ကိုညီ..။
တံခါးကို အသာဆွဲဖွင့်လိုက်တော့ အခုမှ စတင်တွေ့ဆုံသူတွေလို သူနှုတ်ဆက်ပါရဲ့။ မြင်ရတွေ့ရတာကိုပဲ အကျေနပ်ကြီးကျေနပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်မှာ သူ့ကိုပြန်ပြောဖို့ စကားလုံးတွေ ပျောက်ဆုံးကုန်ပါရော။ ဘာလုပ်မိလည်း....သူ့လက်တစ်ဖက်ကို လှမ်းဆွဲလိုက်ကာ အတွင်းဧည့်ခန်းသို့ ခေါ်ခဲ့မိပါတယ်။
ဘယ်လိုပြောရမလဲ သူ့ကို။ သာမန်ဒိတ်ကြသလို တွေ့ကြ လုပ်ကြ ပြီးရင်ပြန်ဆိုတာမျိုး သူထင်မြင်ယူဆနေသလား? သဘောထားနေပြီ လား? အရင်က သူပြောနေကျ ချစ်ခွန်းတုံ့တင်စကားတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီမသိ ကျွန်တော့်အတွက်။
ဖျော်ပေးထားတဲ့ လိမ္မော်ရည်အေးအေးလေးကို သူသောက်ပြီး အခန်းတ၀ိုက်က ပန်းအိုးလေးတွေကို မသိမသာသူကြည့်တယ်။ နောက် တော့ ဖန်ခွက်ကို အသာပြန်ချကာ ဘေးနားမှာထိုင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို လှမ်းဖက်တယ်၊ လည်တိုင်တွေကို နမ်းတယ် တစ်ချက်။ ဒါပဲလား? အလိုက်သိစွာ ပြန်လည်ပွေ့ဖက်လိုက်ရင်း သူ့ရင်အုပ်တွေ ကျောပြင်တွေကို နုညံ့တယ်လို့ သူပြောပြောနေတဲ့ ကျွန်တော့် လက်ဖ၀ါးတွေနဲ့ ပွတ်သပ်မိပါရဲ့။ ခဏတာငြိမ်သက်နေပြီးနောက် သူကျွန်တော့်ပေါင်ပေါ်ကို ခေါင်းအုံးပြီးလှဲချလိုက်ပါရော။ သူ့ဆံနွယ် နုနုလေးတွေက ပေါင်ကြားက ကျွန်တော့် ငပဲတွေ၊ ပေါင်တွင်းသားတွေ ၊ ရွှေဥတွေကို မထိတတိပွတ်သပ် နေတယ် သူလူးလှိမ့်လိုက် တိုင်း။ OMG! ရင်ထဲမှာ တင်းမထားနိုင်ဘူး သွေးတွေဆူပွက်လာပြီး ရင်ခုန်သံတွေမြန်လာရပြီ။
သူ့ရင်အုပ်ပေါ်ကို လက်အလှမ်းသူ ရုတ်တရက် ထရပ်လိုက်ကာ ရေချိုးခန်းဆီသွား အ၀တ်တွေချွတ်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့်ဆီလာလို့ အ၀တ်လဲလှယ်ချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ချွတ်ချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်လေ့လုပ်ထာရှိတဲ့အတိုင်းပေါ့။ နောက်က အသာထလိုက်သွားရင်း တံခါးကို ဟ အသံတိတ်ချောင်းကြည့်တာမှာ သူ့အောက်ခံ brief ကိုဆွဲချွတ်ချိန်...အို...ဘောင်းဘီထဲက ငပဲက ဆတ်ကနဲခုန်ထွက်တယ်။ ပခြုပ်ထဲက မြွေ ခုန်ထွက်သလိုပဲ။ စားစရာ....အရသာရှိတဲ့ အစာတွေ့ရသလို ပါးစပ်ထဲ သွားရည်တွေယိုလာရပါပြီ။ ရေချိုးခန်းထဲက သူထွက်လာ ဟန်ပြင် တော့ ကျွန်တော်အသာ ဆိုဖာပေါ်ပြန်ထိုင်နေလိုက်တာ သူက မော်ဒယ်တွေဟန်ရေးပြသလို ဆိုဖာဆီလှမ်းလာရင်း ပေါင်နှစ် ချောင်းကို ကားကာ ထိုင်ချလိုက်တယ်။ အသင့်ဖြစ်ပြီ.....မင်းလိုချင်တဲ့ အရာက ဒီမှာလို့ အချက်ပြတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ထောင်မတ်နေတဲ့ အာကာသဒုံးပျံ ယာဉ်ကြီးကို ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆာလောင်နေတဲ့ ပါးစပ်ထဲစုပ်မျိုဖို့ မစောင့်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အထာ။
ဒူးကိုအသာထောက် ပေါင်ကြားဆီ ဦးခေါင်းကို ငုံ့ကိုင်းလိုက်ကာ အာကာသဆီ ပျံလွှတ်တော့မယ့် ဒုံးကျည်ဖူးကို နှုတ်ခမ်းလွှာတွေကြား ထည့်သွင်းလိုက်တာပေါ့။ ဟိုးအရင်က ရခဲ့ဖူးတဲ့ သူ့ကိုယ်သင်းနံ့တွေကို ရွှေဥတွေဆီက ရနေပါရဲ့။ မပြောင်းလဲသေးသော အနံ့အသက် လေးလေ။
'မင်း ငါ့ကို တကယ်သတိရနေတာ ဟုတ်ရဲ့လား? မင်းနဲ့ချစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ မေ့လုနီးပါးဖြစ်နေပြီ။ ဒါပေမဲ့ ငါ့ -ီးကို မင်းဒီလိုပြုစုတာ၊ တခြားအကြောင်းအရာတွေမှာ ဂရုစိုက်တာကိုတော့ ငါကြိုက်နေဆဲပဲကွာ'
သူဘာကို လိုချင်နေခဲ့တာလဲဆိုတာ ချက်ချင်းသိလိုက်ရပါပြီ။ ကျွန်တော်လည်းပဲ လိုအပ်တယ်လို့ ခံစားခဲ့ရတာပါ တခြားသူဆီကမရနိုင် တဲ့ သူ့အတွေ့အထိကိုလေ။
ရေကူးဒိုင်ဗင် သင်တန်းတက်ခဲ့တုန်းက အသက်ရှူရှိုက်တဲ့နည်းတစ်ခု သင်ခဲ့ရဖူးတယ်။ ပါးစပ်ကိုဟ လေကို ပြင်းပြင်းရှိုက် နောက်တော့ အဲဒီဝင်လေကို လေးငါးမိနစ်လောက် ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ့် လေ့ကျင့်မှုလေးပါ။ အခုအဲဒီ့နည်းအတိုင်း သူ့ရဲ့ရှည်လျားလှတဲ့ -ီးတစ်ချောင်း လုံးကို ဟိုးအာခံတွင်းထဲထိ ရှိုက်သွင်းလိုက်တယ်။ ရွှေဥတွေနှင့် ကျွန်တော့်မေးစိတွေထိကပ်တဲ့အထိ သွင်းပြီးငြိမ်သက်နေပြီးမှ ဖြည်း ဖြည်းပြန်ထုတ်၊ ကွမ်းသီးခေါင်းရောက်တော့ လျှာကလေးနှင့်ခဏကလိ၊ပြီးမှ တဖြည်းဖြည်းပြန်မျိုချတာ အဆုံးထိ။ ကိုညီနှင့် ဆက်ဆံပတ် သက်ရတိုင်း အမှတ်ရလာတာကတော့ သူကျေနပ်အောင်ကြိုးစားရင်း တဖြည်းဖြည်း cock sucking လုပ်တာရဲ့အထာကို ပိုပိုသိလာ ခြင်းပါ။ ကိုယ့်အ တွက်အထူးသီးသန့် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရော ချစ်ခြင်းကြောင့်ရော စိတ်လိုလက်ရ လုပ်ပေးဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက် ဆိုပါတော့။
လူတိုင်းအပေါ် နွေးနွေးထွေးထွေးဆက်ဆံတတ်တဲ့ သဘောကောင်းတဲ့ ကိုညီ ကျွန်တော့်အပေါ်မှာကျတော့ တစ်မျိုးပါပဲ။
အသက်ကို မျှင်းမျှင်းရှူရှိုက်ရင်း နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာထဲ တိုးတိုးဝင်လာတဲ့ သူ့-ီးကို လျှာနဲ့ရစ်ရစ်ပြီး ကလိပေးရင်း လည်ချောင်းထဲထိ မျှော သွင်းချိန်မှာတော့ သူ့တင်ပါးလုံးကျစ်ကျစ်တွေကို ထိန်းကိုင်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ balls တွေကျွန်တော့်မေးစိကိုထိကပ်ချိန်မှာ လက်ချောင်း လေး တွေသုံးပြီး ထိတွေ့ကစားပေးရတာ အရွယ်ညီ စတီးလုံးတွေကို ကစားရသလိုပါ။ ပွတ်သပ်တာမလုပ်ဘဲ တစ်ခါတစ်ခါ ညှစ်ပေး လိုက်တော့ သူမျက်လုံးတွေ မှေးမှိတ်သွားရင်း 'အား....ရှီး' ဆိုပြီး ခြေချောင်းလေးတွေတောင် တဆတ်ဆတ်တုန်ရဲ့။
လူတစ်ယောက် အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ အကြိုက်ကို မှတ်မိနေခြင်းက ပညာပဲထင်ပါရဲ့။ သူ့-ီးရဲ့ ဆိုဒ်ကလည်း sucking လုပ်ဖို့အ ကောင်း ဆုံးဆိုဒ်ပါပဲ။ သန့်ရှင်းမှုရှိခြင်းကလည်း နှစ်သက်စေသလို သူ့ရွှေရည်တွေ ပါးစပ်ထဲအပြည့်ပန်းထည့်ပေးတာကိုလည်း အရသာ ခံရတာ ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။နှစ်ယောက်သား ဒီကိစ္စမှာ flesh to flesh လုပ်ရတာပိုပြီးချစ်တယ်။ ကိုညီနှင့်ဆို ကျွန်တော် condom မသုံးဘူး။ သူ့ personality ၊ သူ့ charisma တွေက အမြဲ ကျွန်တော့်ကို နွေးထွေးလွန်း တက်ကြွစေလွန်းပါတယ်။
လည်မျိုထဲက ထုတ်လိုက်၊ ပြန်သွင်းလိုက် သူ့ p-hole လေးကို လျှာနဲ့ကလိလိုက် ငပဲဟာပိုပြီးထွားလာတယ်လို့ ခံစားရမိစပြုလာပါပြီ။ Wow! ဘယ်လောက်တက်မက်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဟာပါလိမ့်။
ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ အားလုံးဝင်ဖို့ဆိုရင် ဖြည်းဖြည်းခြင်းပြန်သွင်းရမယ်။ တော်ကြာ အာဗြဲစိန်ဖြစ်သွားမှာ...ဟီး။ လက်နဲ့ အရင်းကို အ သေအချာဆုပ်ကိုင် မာကျောပြီး တဆတ်ဆတ်တုန်နေတဲ့ ကိုညီ့ဟာကြီးကို ထိပ်ပိုင်းလေးပဲ လျှာနှင့် ရေခဲမုန့်ကို လျှက်သလို ဝေ့၀ိုက် ကွမ်းသီးခေါင်းကို ဖြည်ဖြည်းငုံကာ အထုတ်အသွင်းပြု တစ်ချက် တစ်ချက် အာခံတွင်း အတွင်းပိုင်းထိ ဖိကပ်....အိုး...ဒီပစ္စည်းကို လွမ်းရ တပ်မက်လိုက်ရတာ။
သူ့ရင်ထဲက လာတဲ့ခံစားချက်အပြည့် မိန့်မူးသောလေသံဖြင့်ပြောတာများ မပီမသ။ ထိပ်ဖျားကနေ အောက်ခြေအထိ လျှာဖြင့်ကစား နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို တောက်ပတဲ့သူ့မျက်ဝန်းတွေနှင့် စိုက်ကြည့်တာ ရင်ထဲထိုးဖောက်သွားသလိုပါပဲ စူးစူးနင့်နင့်။
အချိန်အနည်းငယ်ကြာတော့ အိပ်ခန်းထဲက ကုတင်ပေါ်မှာ ဟိုသည်လူးလိမ့်ကြရင်း အနေအထားကို ကိုညီပြောင်းလိုက်တယ်။ တင်းပြီး ၀ိုင်းစက်နေတာပဲလို့ သူပြောနေကျ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို ဘောင်းဘီဆွဲချွတ်ကာ ကိုင်တွယ်ရင်း 'ဇာနည် ငါ့ကိုပေးမယ် မဟုတ်လား? မင်းတင်ပါးခပ်ထူထူရဲ့ အရသာကို ပြီးတော့.....'
တခြားလူတွေတော့မသိ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် အကျင့်တူတာက တစ်ယောက်ယောက်နှင့် ဒိတ်ပြီးပြီဆိုရင် ရေမိုးချိုး တစ်ကိုယ်လုံး သန့်နေအောင် ပြုမူထားပြင်ဆင်ထားတတ်ကြတာ။ ဒါမှ ကိုယ့်ပါတနာနဲ့ စိတ်တိုင်းကျ ကိုယ်လက်နှီးနှောနိုင်မယ် မဟုတ်လား အားနာ စရာလည်း နည်းတာပေါ့
သူ့နှုတ်ခမ်းဖျားက ညည်းသံလေး ခပ်တိုးတိုးကနေ ကျယ်လာပါတယ်။ ဘာရမလဲ ကျွန်တော်ပညာကုန်ပြုစုတာကိုးလေ။
မိနစ်လက်တံလေးတွေတဖြည်ဖြည်းရွေ့လာရင်း အပြန်အလှန်ပြုစုနေကြရာက သူထရပ်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်ပေါင်တံတွေကို အိပ်ယာ တစ်ဖက်စွန်းဆီ ဆွဲယူပြီး ၀တ်ထားတဲ့ boxer ဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ်ပေးပါရော။ ခပ်စောင်းစောင်းအနေအထားနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးအ၀တ် ကင်းသွားတဲ့ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးကို သူ အားရပါးရကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ ဘေးမှာ အသာဝင်လှဲလျောင်းရင်း တင်ပါးတွေကို ပွတ်သပ် ဖျစ်ညှစ်ပါ၏။
တင်သားဆိုင်တွေကို သူ့လက်ဖျားတွေနဲ့ ခပ်ပြင်းပြင်းရိုက်ခတ်ရင်း နာကျင်မှုကြောင့် ပြောင်းလဲသွားတဲ့ ကျွန်တော့မျက်နှာအမူအရာကို ဖီးလ်ယူသလားမသိ ရဲပြီးနီသွားတဲ့ လက်ရာတွေကို သူပြန်ပြီးပွတ်သပ်ကြည့်နေပါတယ်။ ငြင်ငြင်သာသာ ကိုင်နေရာကနေ အသားကုန် ညှစ်တယ် နာကျင်မှုကြောင့် ကျွန်တော်အော်လိုက်မိတဲ့အသံကို သူသဘောတကျ ရယ်များပင်ရယ်သေးတော့တာ။
အပြင်ပန်းအရတော့ ကျွန်တော်တို့ ဆက်ဆံရေးဟာ ပြန်လည်စိတ်ဝင်စားစပြုလာပြီလို့ ဆိုရမလို။ သူ့-ီးကို ကျွန်တော့် လျှာတွေနှုတ်ခမ်း သားတွေနှင့် စိတ်လိုလက်ရ ပြုစုတာကို သူနှစ်သက်တယ်။ ခုတင်စွန်းမှာ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို တင် သူ့ကိုယ်လုံးနှင့် အပေါ်က ဖိ ဆောင့်ရတာကို သူပိုကြိုက်တယ်။ အခုလည်း သူစိတ်လိုလက်ရဖြစ်တဲ့အခါ ပြုမူနေကျ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးကို သူဖျစ်ညှစ်ပြီးနမ်း၊ တင်ပါးတွေကို ပိုမိုပေါ်လွင်စေတဲ့ အနေအထားကို ပြုပြင်နေစေပြီး လက်ချောင်းတွေကို ချောဆီတွေစွတ်ကာ တစ်ချောင်းဆီဖြင့် ဖိဖိသွင်း ရင်း ကစားတာ...'အ...အ' နာလိုက်တာ။
နောက်တစ်ခါ.....ပူနွေးတဲ့စိုစွတ်တဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်းသားများဖြင့် ကျွန်တော့်ငပဲကို အဆုံးထိစုပ်မျိုနေတာ ကျွန်တော်သူ့ကိုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အ တိုင်း။ ဘယ်လို ဖီလင်မျိုး ခံစားရမယ်ထင်ပါသလဲ?....အခုအချိန်များ တစ်ယောက်ယောက် လာတောင် မရပ်တန့်စေချင်တော့ဘူး။ ဘယ် လိုများ...ဘယ်လိုများ လုပ်နေတာလည်း ကိုညီရယ် နာကျင်တာနဲ့ချိုသာတာ အရသာနှစ်ခု တစ်ပြိုင်နက် ပေးနေတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ် ထဲမှာလေ တပ်မက်မှု လိုအပ်မှု တောင့်တမှုတွေ ဒီရေလိုမြင့်တက်လာတာ တဖြည်းဖြည်း။
အရှိန်မြင့်နေတဲ့ ခံစားချက်တွေဖြစ်ပေါ်လာချိန်မှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဖုန်းကွယ်ထားတာ ထိန်းချုပ်ထားတာတွေ မရှိနိုင်တော့ ဘူး။ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်က သူ့ကိုအရမ်းတောင့်တနေသလို သူလည်းပဲ လိုလားနေပြီဆိုတာ လက်တွေ့ပြတဲ့အနေနဲ့ တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို အသာဟ ဒစ်ထွားထွားရဲ့ ထိပ်နှင့် တိုးဝှေ့ကာပြလေ့။ သန်မာတဲ့ သူ့လက်ချောင်းတွေနှင့် ကျွန်တော့်တင်ပါးဆုံကို ဆုပ်ကိုင်ကာဖြဲကား ရင်း ကွမ်းသီးခေါင်းမှတစ်ဆင့် တစ်ရစ်ခြင်း ဖိဖိသွင်းတာ။ လှိုဏ်ဂူထဲကို ရထားတစ်စင်း ၀င်နေသလိုပဲ ဖြည်းဖြည်းခြင်း အထုတ်အသွင်း ခဏလုပ်ပြီး လျှောကနဲတဆုံး သူထိုးထည့်လိုက်ပါရဲ့။
ဖင်ထဲ အောင့်ကနဲဖြစ်သွားသလို စိတ်ထဲကလည်း အခုပင်ရုန်းပြီးထွက်ပြေးချင်စိတ်ဖြစ်မိသွားသေးသည်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဆုံးထိအောင် ဆောင့်ဆောင့်လိုက်တဲ့ သူ့လှုပ်ရှားမှုမှာ ငြိငြိသွားရင် အလိုက်သင့်ပြန်လည်လှုပ်ရှားလိုက်ပါတော့တယ်။ ခဏသာ သူငြင်သာပါရဲ့။ အရှိန်ရလာတာနဲ့ သူ့ဆောင့်ချက်များဟာ ဂျက်အင်ဂျင်တပ်ထားသည့် အတိုင်းခပ်ပြင်းပြင်းလေ။
နာတယ်ပြောတော့လည်း အရှိန်လျော့လိုက်ကာ တစ်ချက်ခြင်း အထုတ်အသွင်းလုပ်ပါ တော့တယ်။ ရုတ်တရက် ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာကို ဆွဲထူလိုက်ရင်း ကုတင်စွန်းမှာ ဒူးနှစ်ဖက်ကိုတင်ကာ လေးဘက်ထောက်ကုန်းစေပါတယ်။ အဲဒီ့အနေအထားကြောင့် ကျွန်တော့် တင်ပါး တွေက ပိုပြီးကားနေစေပြီး သူ့စိတ်ကြိုက်ဆောင့်လို့ရစေသတည်းလေ။ ခါးအစုံကို လက်နှက်ဖက်နှင့် ထိန်းကိုင်ထားရင်း နောက်ကနေ သူ့အရှိန်တိုးလိုက်လျော့လိုက် ခါးကို ဇကောဝိုင်းမွှေ့လိုက် အိုး...အရသာ အသစ်တွေ ပေးပါတော့တယ်။ Mmmm!
အဆုံးထိ ဖိဖိသွင်းလိုက်တဲ့အချိန် သူ့ရွှေဥတွေနှင့် ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေ ထိကပ်သွားတဲ့အခါတိုင်း ထူးဆန်းစွာ နာကျင်မှုက အဝေးကို ရောက်ရောက်သွားတယ်။ အပြင်ကိုထုတ်လိုက် အဆုံးထိ ဖိကပ်လိုက်နှင့် စည်းချက်ကို မှန်နေတာပါ။ ချောဆီခပ်များများကြောင့်လည်း အဆင်ပြေနေတဲ့ကျွန်တော်ကလည်း သာယာမှုနဲ့မျောနေတာ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ဘာတွေဖြစ်နေတာ၊ ဘယ်သူက ဘာဆိုတာ မသိတော့ သလိုမျိုး ကိုညီနှင့်အတူ နှစ်ဦးသားအလိုက်သင့်။
ကျွန်တော်ရူးနေသလား? ကျွန်တော်နှင့်ဆို ချစ်ဇာတ်လမ်းဖွင့်ချင်သူများ အများသားပါ။ အခုလို လိင်ဆက်ဆံဖော်အဆင့်သာထားမဲ့သူကို ပြန်ပတ်သက်ဖို့ ချစ်ဖို့ကြိုးစားမိနေခြင်းဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မသနားရာရောက်နေသလား? Love is so strange!
လှုပ်ခါနေတဲ့ တင်သားဆိုင်များ၊ မှန်နံရံကမြင်နေရတဲ့ နှစ်ဦးသားရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေ အော်ညည်းသံသဲ့သဲ့ စတာတွေကြောင့် ကိုညီ ပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားကာ သူ့ဆောင့်ချက်တွေ အထုတ်အသွင်းတွေက တစ်မျိုးတစ်မည်ဖြစ်လာပြီး သကာလ အပြင်ကို ရုတ်တရက် ဆွဲထုတ် condom ကိုချွတ်ကာ ကျွန်တော့်ကျောပြင်ပေါ် နွေးကနဲ နွေးကနဲ။
ဘာမှမပြောကြ လှုပ်ရှားမှုမပြုကြပဲ အတန်ကြာနှစ်ဦးသားငြိမ်သက်နေဖြစ်တာ ခဏ။ ကျွန်တော် အိပ်ယာပေါ်အသာလှဲပြီး သူ့ဖက်ကို မျက်နှာမူလိုက်ချိန်မှာတော့ မထင်မှတ်တဲ့ပြုမူမှုတစ်ခုကို သူလုပ်လိုက်တယ်။ အံသြချိန်တောင်မရတဲ့ ကျွန်တော်လေ။
'ဆက်မပြောနဲ့တော့ ဇာနည်....အစကတည်းက မင်းဟာ ငါ့ချစ်သူဘဲ မင်းကိုစိတ်ခုနေတာသက်သက်'
မျက်ရည်လေးဝေ့ကာ သူ့ကိုငေးကြည့်ဖြစ်ရပါတယ်။ လက်သီးနှင့် ထိုးခံရတာကိုတောင် မနာနိုင်တော့ဘူး။ သူကတော့ အခုမှ စိတ်ဆိုး ပြေသွားတဲ့ အမူအရာဟန်ပန်များဖြင့်ပေါ့။ ခုတင်ပေါ်က ကျွန်တော် ထရပ်ပြီး ရေချိုးခန်းဆီအသွားသူက လှမ်းဆွဲပြီးဖက်တာ ကျစ်ကျစ် ပါအောင်။ ဘယ်မှမသွားပါဘူး မသွားပါဘူးဗျာ...ကိုညီရှိရင် ကျွန်တော့်ဘ၀ပြည့်စုံပါပြီ။
ခုတင်နံဘေးခပ်လှမ်းလှမ်း ပြတင်းက လေအေးအေးတွေ အဝေ့ လိုက်ကာစအလွင့်မှာ နှင်းပန်းဖြူဖြူရဲ့ ရနံ့မွှေးမွှေး သင်းပျံ့လာချိန်မှ နှစ်ဦးသား အတူထကာ ရေချိုးခန်းထဲသွား သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖြစ်ကြတယ်။
မနက်ဖြန်များစွာဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အဓိပ္ပာယ်ရှိလာနိုင်တော့မယ်ထင်ပါရဲ့။
'ဟ...ဒီခေါင်းလျှော်ရည်ဘူးက ရှိတုန်းပဲလား မကုန်သေးဘူးလား ဇာနည်'